३० वर्षमुनिका सवारीचालकले गराउँछन् बढी दुर्घटना (भिडियाेसहित)
गोपाल ढकाल, मनोविद्, मार्क नेपाल –
नेपालमा प्रत्येक दिनजसो सवारी दुर्घटना भइरहेका छन् । दुर्घटनाका कारण धेरैले ज्यान गुमाउने तथा अंगभंग भएर जीवनभर दुःख पाउने समस्या समेत हुने गरेका छन् । दुर्घटना भएपछि २–४ दिन कोकोहोलो हाल्ने अनि बिर्सने गरिन्छ । त्यसपछाडिको कारण पहिल्याएर निराकरण गर्नेतर्फ भने न त प्रभावित न त सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय नै अग्रसर हुने गरेका छन् ।धेरैले सवारी साधन भनेको टेक्निकल पाटो हो भनेर मात्रै बुझेका छन् जब कि त्यो पूर्ण सत्य होइन । अनि नेपालको भौगोलिक अवस्था राम्रो छैन, बाटोघाटोको स्थिति राम्रो छैन भन्ने गरिन्छ, तर अनुसन्धानले के देखाएको छ भने चालकको लापरवाहीका कारण धेरै सवारी दुर्घटना हुन्छ ।अब कुरा उठ्छ, चालकले लापरवाही किन गर्छ ? चालकले लापरवाही गर्नुका पछाडि पनि धेरै कारण हुन्छन्, जसमध्ये व्यक्तिको अथवा चालकको मानसिक स्वास्थ्यले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । जब कि यो धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।एक अनुसन्धानले नेपालमा सरदर प्रत्येक दिन ६ देखि ८ जनाले सडक दुर्घटनामा आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका हुन्छन्, धेरै व्यक्तिहरू अङ्गभङ्ग हुन्छन् भन्ने देखाएकाे छ । दुर्घटनाले आर्थिक क्षति, मानवीय क्षति तथा घरपरिवारमा पनि मानसिक आघात पार्छ । फेरि हाम्रो नेपालमा मानसिक समस्यामा पर्नु अथवा मनोवैज्ञानिक समस्या देखापर्नुको एउटा कारण पनि सवारी दुर्घटना हो । सवारी दुर्घटनामा परेर कसैको मृत्यु भएमा त्यो घरपरिवारमा ठूलो असर पर्छ त्यसलाई हामी मानसिक आघात अथवा ट्रमा भन्छौं । त्यसबाट गुज्रिएको मान्छे अङ्गभङ्ग भएर बाँच्यो भने पनि उसलाई मानसिक आघात पार्ने सम्भावना हुन्छ । चिकित्सकहरूका अनुसार दुर्घटनामा परेर घाइते, अंगभंग भएकाहरूमा मानसिक समस्या देखिने गर्छ । उनीहरूको दिमागमा गम्भीर आघात परेको हुन्छ । दुर्घटनामा बजारिँदा शरीरका विभिन्न अंगमा आघात परेको हुन्छ, जसलाई चिकित्सकीय भाषामा पोलिट्रमा भनिन्छ ।एउटा मनोसामाजिक समस्यामा पर्नुको कारण सवारी दुर्घटना हो । डब्लूएचओले के भन्छ भने नेपालमा मृत्युको चौथो कारण सवारी दुर्घटना हो । नेपालमा जति पनि मृत्यु हुन्छ, त्यसको ७ प्रतिशत सडक दुर्घटनाको कारण हुन्छ । त्यसै गरी एक लाखमा १६ जनाको मृत्यु सडक दुर्घटनाको कारणले हुन्छ ।नेपाल प्रहरीको एक अध्ययनले पनि के देखाउँछ भने जति पनि सडक दुर्घटनाहरू हुन्छन् । त्यसका पछाडि ७१ प्रतिशत चालकको लापरवाही भनेको छ भने १३ प्रतिशत तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउनु भनेको छ ३ प्रतिशतचाहिँ मदिरापान सेवन गरेर सवारी चलाउनु भनेको छ भने २,३ प्रतिशत मात्रै टेक्निकल पक्ष वा मेसिनरी गडबडीका कारणले हुन्छ भनेको छ । नेपाल प्रहरीको मात्र होइन विश्वभरि नै भएका अध्ययनले पनि सवारी दुर्घटनाका पछाडि प्रमुख कारणका रूपमा चालककै लापरवाही देखाउँछन् । चालकले हतार गर्ने, छिटो आवेगमा आउने, आराम नगर्ने, छेउछाउका मान्छेसँग गफ गर्दै सवारी हाँक्ने, गाडीमा ठूलो आवाजमा गीत बजाउने, गाडीको अवस्था जाँच नगरी चलाउनेजस्ता कारणले दुर्घटना निम्तिने गर्छ । यस्तो अवस्था आउँछ कसरी त ?चालकले किन गर्छ त लापरवाही ?लापरवाही त्यसै हुँदैन, गरिँदैन । लापरवाही हुनुमा मानसिक स्वास्थ्यका कुराहरू आउँछन् । जस्तै कुनै चालकले एकदमै तीव्र्र गतिमा गाडी चलाउँछ भने त्यसपछाडिको एउटा कारण भनेको ए.डी.एच.डी अर्थात् एटेन्सन डिपिसिड हाईपर डिसअर्डर हो । यो एक किसिमको मानसिक समस्या नै हो । यस्तो समस्या हुँदा मानिस एकदमै चञ्चल, चकचके हुन्छ ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दैन, ट्राफिक नियमहरू उनले उल्लङ्घन गर्छ । रातो बत्ती बलेका बेला पनि ऊ धैर्य गर्न नसक्ने स्वभाव हुन्छ । तीव्र गतिमा गाडी चलाउँछ ।त्यस्तै बोडरलाईन पर्सनालिटी डिसअर्डर भएको व्यक्ति छ भने ऊ चाँडो आवेगमा आउँछ निर्णय लिन सक्दैन अस्थिर हुन्छ त्यस्ता रोग भएको चालक छ भने पनि त्यतिखेर सवारी दुर्घटना हुन सक्छ ।न्यूरोटिक पर्सनालिटी भएको व्यक्ति एकदमै अस्थिर हुने, चाँडो रिसाउने चाँडो आवेगमा आउने हुन्छ । त्यस्तो व्यक्ति चालक छ भने पनि सवारी दुर्घटना हुने सम्भावना बढ्छ ।अर्को जाँड रक्सी सेवन पनि आफैमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो । हाम्रो नेपालमा एउटा चालकले बिहानदेखि बेलुकासम्मै गाडी चलाउँछ । रातीको समयमा धेरैजसोले मदिरा सेवन गर्छन् ।अर्को कुरा चालकले निद्रा पुग्ने गरी सुत्न पाएको हुँदैन । बिहान ४ बजेबाट गाडी चलाएर निस्केको मान्छे बेलुकाको ८,९ बजेसम्म गाडी चलाउँछ । कतिले त रातभर पनि चलाउँछन् । त्यस्ता व्यक्तिसँग मनोरञ्जनको अभाव हुन्छ, मनोरञ्जनकै लागि रक्सी सेवन गर्छन् । नेपालका सवारी चालकहरूको लाईफ स्टाइल पनि सन्तुलित छैन । यी विविध कारणले गर्दा उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परिरहको हुन्छ ।एउटा रिर्सचबाट के पनि पत्ता लागेको छ भने धेरैजसो सवारी चालकहरू तनावमा छन् । तनावमा भएपछि रिस उठ्छ, झर्को लाग्छ ।किन तनावमा हुन्छन् त चालकहरू ?बिहानदेखि गाडी चलाउनुपर्छ, आफ्नो गुजारा पनि राम्रोसँग चलेको छैन, जाम त्यत्तिकै छ, धूवाँधूलो पनि त्यत्तिकै छ । ट्राफिकहरूले पनि चालकलाई त्यति राम्रो व्यवहार गरेको देखिँदैन त्यसैगरी समाजमा सवारी चालकलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यति राम्रो छैन । अनपढ, ड्राईभर भन्ने बित्तिकै हाम्रो सोचाइ फरक हुन्छ । ड्राईभरप्रति सामाजिक व्यवहार फरक हुन्छ । यस्ता कुराहरूले चालकलाई तनाव दिइरहेको हुन्छ ।सहरी इलाकामा ट्राफिक जाम, सडकका खाल्डाखुल्डी, ट्राफिक प्रहरी र आममानिसले गर्ने रुखो व्यवहार, धुवाँधुलो, ध्वनि प्रदूषण र कामको चापले चालकमा तनाव सिर्जना गराउँछ भने ग्रामीण भेगमा पनि ट्राफिक जाम, धुवाँ र ध्वनि प्रदूषणजस्ता कुराबाहेक अन्य समस्या करिबकरिब उस्तै हुन्छन् ।यसबाहेक यात्रुको व्यवहार, होहल्ला र ट्राफिक जामको कठिनाइ, गाडीसाहुको दबाब र कमजोर आर्थिक अवस्था, यात्रुले जथाभावी रोक्न दिने गरेको दबाब, यात्रुसँगको भाडा विवादजस्ता तनाव पनि चालकले बेहोर्नुपर्छ ।दुर्घटनामा चालक किन मुछिन्छन् त ?मानिस सामान्यतः ८ घण्टा सुत्नुपर्छ, ८ घण्टा काम गर्नुपर्छ, ८ घण्टा रमाइलो गर्नुपर्छ तर चालकहरू १८, २० घण्टासम्म पनि गाडी चलाउँछन् । यसरी लामो समयसम्म गाडी चलाउँदा मोनोटोनस पनि हुन्छ । यस्ता कारणहरूले पनि चालक तनावमा जान्छ र सडक दुर्घटना हुन्छ । अर्को जटिल समस्या भनेको नेपालमा ड्राईभिङ लाईसेन्स दिँदा चालककाे मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण गरिँदैन ।एन्टी सोसियल पर्सनालिटी अथवा साईको पार्ट भएको व्यक्तिले पनि नियम उल्लङ्घन गर्छ, उसलाई मान्छे मार्नु कुनै पनि ठूलो हुँदैन । उसमा कुनै मानवीयता भन्ने कुरा नै हुँदैन । हामीले सुनिरहेको हुन्छौं कि ड्राईभरले एउटा सानो ठक्कर लाग्ने बित्तिकै ब्याक गरेर मान्छे मार्छ । त्यो हुनु भनेको उक्त ड्राईभर एन्टी सोसियल पर्सनालिटी भएकाले हो । एन्टी सोसियल पर्सनालिटी भएको व्यक्तिमा दया, माया, करुणा हुँदैन जसकारण मान्छे मार्नु उसका लागि कुनै ठूलो कुरा हुँदैन ।अर्को छ, इन्टरमिटेन एक्सप्लोसिभ डिसअर्डर । यो पनि एक किसिमको मानसिक रोग हो । यस्तो मानसिक रोग भएका मान्छेहरू सानो घटना केही भयो भने पनि दशौं गुणा आक्रोशित हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिले पनि दुर्घटना पार्न सक्छन् ।सार्वजनिक सवारीका अधिकांश चालकमा ‘न्युरोटिक पर्सनालिटी’ देखिन्छ । ‘त्यस्तो पर्सनालिटी भएका व्यक्तिमा चिन्ता गर्ने, जोखिम लिने, रुखो व्यवहार गर्ने र अपशब्द बोल्ने समस्या हुन्छ ।एक अध्ययनअनुसार सवारीचालकहरूमा डिप्रेसन, एन्जाइटी डिसअर्डर, छारेरोग, एडिएचडी, बायोपोलार, डिमेन्सिया, साइकोसिस र तनावजस्ता मानसिक समस्या पाइएको छ । यस्तो समस्या भएका व्यक्ति धैर्य गर्न नसक्ने, बिर्सने, बढी आत्मविश्वास, छिटै आवेगमा आउने र जोखिम लिन नडराउने स्वभावका हुन्छन् ।यसरी हेर्दा धेरै यस्ता मानसिक रोगहरू छन् जसको कारणले गर्दा सडक दुर्घटनाहरू भइरहेका हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्ति चालक छन् भने बारम्बार दुर्घटनामा परिरहेका हुन्छन् ।दक्षिण एसिया र अफ्रिकी देशहरूमा सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारक सवारीचालक नै देखिने गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार १५ वर्षदेखि २९ वर्ष उमेरका सवारीचालकले बढी दुर्घटना गराएको पाइन्छ । यसको कारण यो उमेर समूहका मानिसहरू अलिक आवेगमा आउँछन्, निर्णय लिने क्षमता एकदमै कमजोर हुने भएकाले दुर्घटनामा पर्छन् । साथै उनीहरूमा अति आत्मविश्वास देखिने गरेको छ ।के गर्ने ?यसका बारेमा सरोकारवालाहरू एकदमै सचेत हुन र लाइसेन्स दिँदा तथा नवीकरण गर्दा मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्न जरुरी छ ।सवारी साधनको यान्त्रिक कारणले मात्र सडक दुर्घटना भइरहेको हुँदैन त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको मानसिक स्वास्थ्य हो जुन कुरा हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ । सडकको अवस्था मात्रै दुर्घटनाको कारण होइन ।सवारीचालकलाई गरिने सामाजिक व्यवहार, उनीहरूको शिक्षाको स्तर, पारिवारिक र सामाजिक वातावरण, लाइसेन्स दिँदा शिक्षा र स्वास्थ्यको निश्चित मापदण्ड नहुनुजस्ता कारण यसमा जोडिन्छन् । यस्तै, चालकलाई अनिवार्य बिदा र तनाव व्यवस्थापन पनि आवश्यक छ । साथै अनिद्रा, मनोरञ्जनको कमी र तनाव व्यवस्थापन नहुँदा चालकमा मानसिक समस्या निम्तिन्छ र यही नै दुर्घटनाको कारण बन्दछ ।हेर्नुहाेस् भिडियाे :-https://www.youtube.com/watch?v=eAn1APOU_8Y
२४ पुष २०७६, बिहीबार १५:४१
नेपालमा प्रत्येक दिनजसो सवारी दुर्घटना भइरहेका छन् । दुर्घटनाका कारण धेरैले ज्यान गुमाउने तथा अंगभंग भएर जीवनभर दुःख पाउने समस्या समेत हुने गरेका छन् । दुर्घटना भएपछि २–४ दिन कोकोहोलो हाल्ने अनि बिर्सने गरिन्छ । त्यसपछाडिको कारण पहिल्याएर निराकरण गर्नेतर्फ भने न त प्रभावित न त सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय नै अग्रसर हुने गरेका छन् ।
धेरैले सवारी साधन भनेको टेक्निकल पाटो हो भनेर मात्रै बुझेका छन् जब कि त्यो पूर्ण सत्य होइन । अनि नेपालको भौगोलिक अवस्था राम्रो छैन, बाटोघाटोको स्थिति राम्रो छैन भन्ने गरिन्छ, तर अनुसन्धानले के देखाएको छ भने चालकको लापरवाहीका कारण धेरै सवारी दुर्घटना हुन्छ ।
अब कुरा उठ्छ, चालकले लापरवाही किन गर्छ ? चालकले लापरवाही गर्नुका पछाडि पनि धेरै कारण हुन्छन्, जसमध्ये व्यक्तिको अथवा चालकको मानसिक स्वास्थ्यले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । जब कि यो धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।
एक अनुसन्धानले नेपालमा सरदर प्रत्येक दिन ६ देखि ८ जनाले सडक दुर्घटनामा आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका हुन्छन्, धेरै व्यक्तिहरू अङ्गभङ्ग हुन्छन् भन्ने देखाएकाे छ । दुर्घटनाले आर्थिक क्षति, मानवीय क्षति तथा घरपरिवारमा पनि मानसिक आघात पार्छ । फेरि हाम्रो नेपालमा मानसिक समस्यामा पर्नु अथवा मनोवैज्ञानिक समस्या देखापर्नुको एउटा कारण पनि सवारी दुर्घटना हो । सवारी दुर्घटनामा परेर कसैको मृत्यु भएमा त्यो घरपरिवारमा ठूलो असर पर्छ त्यसलाई हामी मानसिक आघात अथवा ट्रमा भन्छौं । त्यसबाट गुज्रिएको मान्छे अङ्गभङ्ग भएर बाँच्यो भने पनि उसलाई मानसिक आघात पार्ने सम्भावना हुन्छ । चिकित्सकहरूका अनुसार दुर्घटनामा परेर घाइते, अंगभंग भएकाहरूमा मानसिक समस्या देखिने गर्छ । उनीहरूको दिमागमा गम्भीर आघात परेको हुन्छ । दुर्घटनामा बजारिँदा शरीरका विभिन्न अंगमा आघात परेको हुन्छ, जसलाई चिकित्सकीय भाषामा पोलिट्रमा भनिन्छ ।
एउटा मनोसामाजिक समस्यामा पर्नुको कारण सवारी दुर्घटना हो । डब्लूएचओले के भन्छ भने नेपालमा मृत्युको चौथो कारण सवारी दुर्घटना हो । नेपालमा जति पनि मृत्यु हुन्छ, त्यसको ७ प्रतिशत सडक दुर्घटनाको कारण हुन्छ । त्यसै गरी एक लाखमा १६ जनाको मृत्यु सडक दुर्घटनाको कारणले हुन्छ ।
नेपाल प्रहरीको एक अध्ययनले पनि के देखाउँछ भने जति पनि सडक दुर्घटनाहरू हुन्छन् । त्यसका पछाडि ७१ प्रतिशत चालकको लापरवाही भनेको छ भने १३ प्रतिशत तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउनु भनेको छ ३ प्रतिशतचाहिँ मदिरापान सेवन गरेर सवारी चलाउनु भनेको छ भने २,३ प्रतिशत मात्रै टेक्निकल पक्ष वा मेसिनरी गडबडीका कारणले हुन्छ भनेको छ । नेपाल प्रहरीको मात्र होइन विश्वभरि नै भएका अध्ययनले पनि सवारी दुर्घटनाका पछाडि प्रमुख कारणका रूपमा चालककै लापरवाही देखाउँछन् । चालकले हतार गर्ने, छिटो आवेगमा आउने, आराम नगर्ने, छेउछाउका मान्छेसँग गफ गर्दै सवारी हाँक्ने, गाडीमा ठूलो आवाजमा गीत बजाउने, गाडीको अवस्था जाँच नगरी चलाउनेजस्ता कारणले दुर्घटना निम्तिने गर्छ । यस्तो अवस्था आउँछ कसरी त ?
चालकले किन गर्छ त लापरवाही ?
लापरवाही त्यसै हुँदैन, गरिँदैन । लापरवाही हुनुमा मानसिक स्वास्थ्यका कुराहरू आउँछन् । जस्तै कुनै चालकले एकदमै तीव्र्र गतिमा गाडी चलाउँछ भने त्यसपछाडिको एउटा कारण भनेको ए.डी.एच.डी अर्थात् एटेन्सन डिपिसिड हाईपर डिसअर्डर हो । यो एक किसिमको मानसिक समस्या नै हो । यस्तो समस्या हुँदा मानिस एकदमै चञ्चल, चकचके हुन्छ ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दैन, ट्राफिक नियमहरू उनले उल्लङ्घन गर्छ । रातो बत्ती बलेका बेला पनि ऊ धैर्य गर्न नसक्ने स्वभाव हुन्छ । तीव्र गतिमा गाडी चलाउँछ ।
त्यस्तै बोडरलाईन पर्सनालिटी डिसअर्डर भएको व्यक्ति छ भने ऊ चाँडो आवेगमा आउँछ निर्णय लिन सक्दैन अस्थिर हुन्छ त्यस्ता रोग भएको चालक छ भने पनि त्यतिखेर सवारी दुर्घटना हुन सक्छ ।
न्यूरोटिक पर्सनालिटी भएको व्यक्ति एकदमै अस्थिर हुने, चाँडो रिसाउने चाँडो आवेगमा आउने हुन्छ । त्यस्तो व्यक्ति चालक छ भने पनि सवारी दुर्घटना हुने सम्भावना बढ्छ ।
अर्को जाँड रक्सी सेवन पनि आफैमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो । हाम्रो नेपालमा एउटा चालकले बिहानदेखि बेलुकासम्मै गाडी चलाउँछ । रातीको समयमा धेरैजसोले मदिरा सेवन गर्छन् ।
अर्को कुरा चालकले निद्रा पुग्ने गरी सुत्न पाएको हुँदैन । बिहान ४ बजेबाट गाडी चलाएर निस्केको मान्छे बेलुकाको ८,९ बजेसम्म गाडी चलाउँछ । कतिले त रातभर पनि चलाउँछन् । त्यस्ता व्यक्तिसँग मनोरञ्जनको अभाव हुन्छ, मनोरञ्जनकै लागि रक्सी सेवन गर्छन् ।
नेपालका सवारी चालकहरूको लाईफ स्टाइल पनि सन्तुलित छैन । यी विविध कारणले गर्दा उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परिरहको हुन्छ ।
एउटा रिर्सचबाट के पनि पत्ता लागेको छ भने धेरैजसो सवारी चालकहरू तनावमा छन् । तनावमा भएपछि रिस उठ्छ, झर्को लाग्छ ।
किन तनावमा हुन्छन् त चालकहरू ?
बिहानदेखि गाडी चलाउनुपर्छ, आफ्नो गुजारा पनि राम्रोसँग चलेको छैन, जाम त्यत्तिकै छ, धूवाँधूलो पनि त्यत्तिकै छ । ट्राफिकहरूले पनि चालकलाई त्यति राम्रो व्यवहार गरेको देखिँदैन त्यसैगरी समाजमा सवारी चालकलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यति राम्रो छैन । अनपढ, ड्राईभर भन्ने बित्तिकै हाम्रो सोचाइ फरक हुन्छ । ड्राईभरप्रति सामाजिक व्यवहार फरक हुन्छ । यस्ता कुराहरूले चालकलाई तनाव दिइरहेको हुन्छ ।
सहरी इलाकामा ट्राफिक जाम, सडकका खाल्डाखुल्डी, ट्राफिक प्रहरी र आममानिसले गर्ने रुखो व्यवहार, धुवाँधुलो, ध्वनि प्रदूषण र कामको चापले चालकमा तनाव सिर्जना गराउँछ भने ग्रामीण भेगमा पनि ट्राफिक जाम, धुवाँ र ध्वनि प्रदूषणजस्ता कुराबाहेक अन्य समस्या करिबकरिब उस्तै हुन्छन् ।
यसबाहेक यात्रुको व्यवहार, होहल्ला र ट्राफिक जामको कठिनाइ, गाडीसाहुको दबाब र कमजोर आर्थिक अवस्था, यात्रुले जथाभावी रोक्न दिने गरेको दबाब, यात्रुसँगको भाडा विवादजस्ता तनाव पनि चालकले बेहोर्नुपर्छ ।
दुर्घटनामा चालक किन मुछिन्छन् त ?
मानिस सामान्यतः ८ घण्टा सुत्नुपर्छ, ८ घण्टा काम गर्नुपर्छ, ८ घण्टा रमाइलो गर्नुपर्छ तर चालकहरू १८, २० घण्टासम्म पनि गाडी चलाउँछन् । यसरी लामो समयसम्म गाडी चलाउँदा मोनोटोनस पनि हुन्छ । यस्ता कारणहरूले पनि चालक तनावमा जान्छ र सडक दुर्घटना हुन्छ । अर्को जटिल समस्या भनेको नेपालमा ड्राईभिङ लाईसेन्स दिँदा चालककाे मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण गरिँदैन ।
एन्टी सोसियल पर्सनालिटी अथवा साईको पार्ट भएको व्यक्तिले पनि नियम उल्लङ्घन गर्छ, उसलाई मान्छे मार्नु कुनै पनि ठूलो हुँदैन । उसमा कुनै मानवीयता भन्ने कुरा नै हुँदैन । हामीले सुनिरहेको हुन्छौं कि ड्राईभरले एउटा सानो ठक्कर लाग्ने बित्तिकै ब्याक गरेर मान्छे मार्छ । त्यो हुनु भनेको उक्त ड्राईभर एन्टी सोसियल पर्सनालिटी भएकाले हो । एन्टी सोसियल पर्सनालिटी भएको व्यक्तिमा दया, माया, करुणा हुँदैन जसकारण मान्छे मार्नु उसका लागि कुनै ठूलो कुरा हुँदैन ।
अर्को छ, इन्टरमिटेन एक्सप्लोसिभ डिसअर्डर । यो पनि एक किसिमको मानसिक रोग हो । यस्तो मानसिक रोग भएका मान्छेहरू सानो घटना केही भयो भने पनि दशौं गुणा आक्रोशित हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिले पनि दुर्घटना पार्न सक्छन् ।
सार्वजनिक सवारीका अधिकांश चालकमा ‘न्युरोटिक पर्सनालिटी’ देखिन्छ । ‘त्यस्तो पर्सनालिटी भएका व्यक्तिमा चिन्ता गर्ने, जोखिम लिने, रुखो व्यवहार गर्ने र अपशब्द बोल्ने समस्या हुन्छ ।
एक अध्ययनअनुसार सवारीचालकहरूमा डिप्रेसन, एन्जाइटी डिसअर्डर, छारेरोग, एडिएचडी, बायोपोलार, डिमेन्सिया, साइकोसिस र तनावजस्ता मानसिक समस्या पाइएको छ । यस्तो समस्या भएका व्यक्ति धैर्य गर्न नसक्ने, बिर्सने, बढी आत्मविश्वास, छिटै आवेगमा आउने र जोखिम लिन नडराउने स्वभावका हुन्छन् ।
यसरी हेर्दा धेरै यस्ता मानसिक रोगहरू छन् जसको कारणले गर्दा सडक दुर्घटनाहरू भइरहेका हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्ति चालक छन् भने बारम्बार दुर्घटनामा परिरहेका हुन्छन् ।
दक्षिण एसिया र अफ्रिकी देशहरूमा सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारक सवारीचालक नै देखिने गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार १५ वर्षदेखि २९ वर्ष उमेरका सवारीचालकले बढी दुर्घटना गराएको पाइन्छ । यसको कारण यो उमेर समूहका मानिसहरू अलिक आवेगमा आउँछन्, निर्णय लिने क्षमता एकदमै कमजोर हुने भएकाले दुर्घटनामा पर्छन् । साथै उनीहरूमा अति आत्मविश्वास देखिने गरेको छ ।
यसका बारेमा सरोकारवालाहरू एकदमै सचेत हुन र लाइसेन्स दिँदा तथा नवीकरण गर्दा मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्न जरुरी छ ।
सवारी साधनको यान्त्रिक कारणले मात्र सडक दुर्घटना भइरहेको हुँदैन त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको मानसिक स्वास्थ्य हो जुन कुरा हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ । सडकको अवस्था मात्रै दुर्घटनाको कारण होइन ।
सवारीचालकलाई गरिने सामाजिक व्यवहार, उनीहरूको शिक्षाको स्तर, पारिवारिक र सामाजिक वातावरण, लाइसेन्स दिँदा शिक्षा र स्वास्थ्यको निश्चित मापदण्ड नहुनुजस्ता कारण यसमा जोडिन्छन् । यस्तै, चालकलाई अनिवार्य बिदा र तनाव व्यवस्थापन पनि आवश्यक छ । साथै अनिद्रा, मनोरञ्जनको कमी र तनाव व्यवस्थापन नहुँदा चालकमा मानसिक समस्या निम्तिन्छ र यही नै दुर्घटनाको कारण बन्दछ ।
हेर्नुहाेस् भिडियाे :-
accident, driver, gopal dhakal, मार्क नेपाल
Prevअमेरिकालाई हानी गरे इराकमाथि थप नाकाबन्दी -राष्ट्रपति ट्रम्प
काभ्रेमा भएका छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्युNext